अञ्जनीकुमार शर्मा - विकिपिडिया
डा. अञ्जनीकुमार शर्मा ढकाल नेपालका पहिलो र्सजन (शल्यक्रियाका चिकित्सक) र पहिलो क्यान्सररोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ। उहाँको जन्म सन् १९३२ जून ७ तारिखमा सिराहा जिल्लाको भलुवाहीमा भएको हो। डा. शर्माका पिताको नाम भवबिनोद र माताको नाम चुनुदेवी हो। उहाँ माहिलो छोरा हो।
विज्ञानमा आइएबराबर पढेपछि उहाँले कोलकाता मेडिकल कलेजबाट एमबी र बीएस गर्नुभयो। दरभंगा मेडिकल कलेजबाट एमए सक्नुभयो। बेलायतको रोयल कलेज अफ र्सजन्सबाट 'एफआरसिएस्' गर्नुभयो। त्यसपछि अमेरिकाबाट एफआइसिएस र एफएसियस गर्नुभयो। सबै पर्ढाई डाक्टरीसम्बन्धी हुन्।
उहाँले राजा महेन्द्रका पालामा राजपरिवारका सदस्यको स्वास्थ्य हेर्ने मौका पाउनुभयो। काठमाडौंको वीर अस्पताल, विरानगरको कोशी अञ्चल अस्पताल, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, नेपाल मेडिकल कलेज आदिमा रहेर असंख्य बिरामीको उपचार गर्नुभयो। अहिले भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा सेवारत हुनुहुन्छ। गोर्खा दक्षिणबाहुजस्ता पुरस्कार पाएका शर्माले डाक्टरहरूकै विभिन्न संस्थामा रहेर काम गर्नुभएको छ।
उहाँका विभिन्न पत्रिका तथा जर्नलमा विभिन्न लेख प्रकाशित छन्। उहाँले तयार पारेको 'प्रिन्सिपल अफ र्सजरी फर नर्सेज' पुस्तकको चौथो संस्करण आएको छ। उहाँले आफ्नो गाउँमा स्वास्थ्य र शिक्षाका लागि केही काम पनि गर्नुभएको छ। देशका विभिन्न भाग र थुप्रै विदेश यात्राको अनुभव पनि छ।
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=अञ्जनीकुमार_शर्मा&oldid=981721" बाट अनुप्रेषित
यो पृष्ठलाई अन्तिमपटक १२:३६, ९ जनवरी २०२१ मा परिवर्तन गरिएको थियो।